हामी एना रिवेरा मुइज र फतिमा मार्टेन रोड्रिगिज, टोरेन्टे ब्यालेस्टर अवार्ड २०१ 2017 | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | प्रतियोगिता र पुरस्कार, साक्षात्कार, लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला
Ana Rivera को शीर्ष फोटो शिष्टाचार।
अस्टुरियन अना Lena Rivera Muñiz र टेनेरिफ फातिमा मार्टिन रोड्रिगेज यो थियो XXIX Torrente Ballester पुरस्कार २०१ of का विजेताहरूपहिलो पटक प्रदान गरियो पूर्व aequo पछिल्लो डिसेम्बर तिनीहरूको सम्बन्धित उपन्यासहरू के मरेका चुप लागेका छन् y धुन्धको कोण प्रतिस्पर्धाको निर्णायकको आधारमा उनीहरू "उनीहरूको साहित्यिक गुण" को लागी पुरस्कार पाउन योग्य थिए।
हामीसँग भाग्यमानी छ लेखकहरूको यस नम्र टोलीमा अना Lena Rivera Muñiz Actualidad Literatura को। आज हामीले दुबै लेखकसँग पुरस्कार, उनीहरूका कामहरू, क्यारियर र भविष्यका परियोजनाहरू बारेमा कुरा गरेका थियौं.
विगतमा टोरेन्टे ब्यालेस्टर पुरस्कारको XXIX संस्करण स्प्यानिश भाषामा कथन, १ countries भन्दा बढी देशका लेखकहरूले कूल un११ अप्रकाशित कार्यहरूमा भाग लिए। यो पुरस्कार १ 1989 XNUMX मा जन्म भएको थियो र संग सम्पन्न छ २,25.000,००० युरो र संस्करण विजयी प्रतिलिपि को।
1 Fátima Martín Rodríguez (सान्ता क्रुज डे टेनराइफ, १ 1968 XNUMX))
2 अना Lena Rivera Muñiz (अस्टुरियस, १ 1972 XNUMX२)
3 हाम्रो अन्तर्वार्ता
3.0.1 अझै पुरस्कार र सफलताको बचत गर्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई कस्तो लाग्यो बताउनुहोस्।
3.0.2 तपाईलाई के लाग्छ यो पुरस्कारले तपाईलाई त्यो सफलता र मान्यताको साथसाथ ल्याउँछ?
3.0.3 तपाईं दुईवटा वाक्यमा के भन्न सक्नुहुन्छ जुन मरेपछि के हुन्छ शान्त हुन्छ र धुवाँको कोण?
3.0.4 तपाईं कुन नयाँ परियोजनाहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ?
3.0.5 तपाइँको उपन्यास संग कुनै ढोंग वा तपाइँ मात्र कथा भन्न चाहानुहुन्छ?
3.0.6 तपाईंले याद गरेको वा पढ्ने पहिलो पुस्तक के थियो? र एक जसले निर्णायक रूपमा तपाइँलाई लेखनमा समर्पण चिन्ह लगाउँछ?
3.0.7 तपाईका मुख्य लेखकहरू को हुन्? र तपाइँको काममा सबैभन्दा प्रभावशाली?
3.0.8 के तपाईंलाई लेख्ने क्रममा कुनै उन्माद वा बानी छ?
3.0.9 र जब तपाइँ समाप्त गर्नुहुन्छ, के तपाइँ तपाइँको वातावरणलाई राय, सल्लाह वा सुधारको लागि सोध्नुहुन्छ?
3.0.10 तपाइँ तपाइँका शैलीहरू कसरी परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ?
3.0.11 तिमी अहिले कुन किताब पढ्दै छौ?
3.0.12 के तपाईं ती लेखकहरूलाई केही सल्लाह दिन हिम्मत गर्नुहुन्छ जुन भर्खर सुरु भयो?
Fátima Martín Rodríguez (सान्ता क्रुज डे टेनराइफ, १ 1968 XNUMX))
क्यानारिया, सूचना विज्ञानको स्नातक, म्याड्रिडको कम्पुलेटन्स युनिवर्सिटीमा र फाइन आर्ट्सको अध्ययनको साथ, ला लागुना विश्वविद्यालयमा। को लेखक धुन्धको कोण, टोरेन्टे ब्यालेस्टर पुरस्कार २०१ with बाट सम्मानित उपन्यास, क्यारेनियन स्कूल अफ लिटरेरी क्रिएसनमा प्रशिक्षण गरिएको छ।. २०१२ मा उनीहरुले अनुभवका लागि ओरोला पुरस्कार र २०११ मा सांस्कृतिक क्षेत्र माइक्रो-कहानी प्रतियोगितामा तेस्रो पुरस्कार प्राप्त गरेका छन। उनले फोटोग्राफी र दृश्य कला परियोजनाहरु जस्तै विकसित गरेका छन्। शब्दहरूको प्रकाश (एफ / Col कलेक्टिव र कवि कोरियोलानो गोन्जालेज मोन्टएसको साथ फोटोग्राफी र हाइकु कविता), र आर्किटाइप्स, अन्वेषण PHOTOESPAÑA २०१२ मा चयनित काम, अन्यहरू बीच।
अना Lena Rivera Muñiz (अस्टुरियस, १ 1972 XNUMX२)
अस्थिरिया र म्याड्रिडका निवासी, उनीसँग आईसीएडीईबाट कानून र व्यवसाय प्रशासनमा डिग्री छ र ग्रसिया सान सेबास्टिन अभिनय गरी अपराध उपन्यास श्रृंखलाको लेखक। तपाईंको पहिलो केस, के मरेका चुप लागेका छन्, टोरेन्टे ब्यालेस्टर पुरस्कार २०१ 2017 को पुरस्कार र यसै वर्षको मेमा फर्नान्डो लारा पुरस्कारको लागि फाइनलिस्ट पुरस्कार प्रदान गर्न अझ सफल भएको छैन।
हामी तपाइँलाई तपाइँको व्यावसायिक र साहित्यिक क्यारियर, तपाइँको भविष्यका परियोजनाहरू र अन्य विशेष पक्षहरूको बारेमा हामीलाई बताउन केहि प्रश्नहरूको प्रस्ताव गर्दछौं। र हामी तपाईको निश्चित रमाईलो उत्तर भन्दा बढि अग्रिम धन्यवाद दिन्छौं।
अझै पुरस्कार र सफलताको बचत गर्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई कस्तो लाग्यो बताउनुहोस्।
अना: Torrente Ballester को प्रतिष्ठा संग एक पुरस्कार मा आफ्नो काम मान्यता प्राप्त देख्ने भावना भावना को एक अतुलनीय स्नान हो। यो एक धेरै एक्लो पेशा हो र तपाई आफैंलाई धेरै व्यक्तिहरू र त्यस्ता साहित्यिक स्तरबाट सेरोटोनिन किकको रूपमा मान्यता दिनुहुन्छ। एकै साथ दुई लेखकलाई प्रदान गरिएको यस पुरस्कारको विशेष परिस्थितिहरू थप विलासी भएको छ: तिनीहरूले मलाई फातिमा, मेरो साथी, एक असाधारण लेखक, जसले आफैंलाई विचार, परियोजना र सपना बाँड्नका लागि भेट्ने अनुमति दिएका छन् जुन बाहेक कोही छैन। संसार र यस शिल्प को बुझ्न र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
फातिमा: यो एक अप्रत्याशित घटना हो जुन मेरा सबै अपेक्षाहरूलाई पार गर्‍यो। म यस ठूलो प्रतियोगितामा १ the अन्तिम चयनहरु मध्ये एक भएको सपना देखेको छु, तर म यो पहिलो उपन्यास संग यो परिणाम कल्पना गर्न सक्दिन; तपाईंले अझै पनि यसलाई आत्मसात् गर्नु पर्छ। ला Coruña मा पुरस्कार समारोह धेरै उत्साहजनक थियो र प्रान्तीय परिषदले हामीलाई धेरै समर्थन गरेको छ। यो तथ्य यो हो कि यो पहिलो पटक दुई लेखकहरु लाई वितरित गरियो पूर्व aequo यो धेरै सकारात्मक भएको छ र राम्रो समय दिन रोक्दैन। मेरो साथी पुरस्कार विजेता, आना लेना एक अद्भुत र प्रशंसनीय लेखक हुन्। हामीलाई थाहा पाउँदा हामीलाई उद्देश्यहरू एकताबद्ध गर्न र अनुभवहरू आदानप्रदान गर्न अनुमति दिएको छ। पहिलो क्षण देखि आत्मीयता निरपेक्ष भएको छ, र कुनै श doubt्का बिना अवसरहरूको स्रोत जुन हामी प्रत्येक चरणमा साझा गर्छौं।
तपाईलाई के लाग्छ यो पुरस्कारले तपाईलाई त्यो सफलता र मान्यताको साथसाथ ल्याउँछ?
अना: पाठकहरू सम्म पुग्न अवसर, जुन यो साहसिक कार्यको अन्तिम लक्ष्य हो। मेरो कथा पढ्ने प्रत्येक पाठकले यसलाई आफ्नै बनाउनेछ, आफ्नै साहस निर्माण गर्नेछ, र अद्वितीय हुनेछ भन्ने सोच्न म मोहित गर्दछु। त्यहाँ धेरै हुनेछ के मरेका चुप लागेका छन् जब पाठकहरूले यसलाई पढ्छन् र ती सबैले आफ्नो कल्पनासँगै केही समय एक्लै बिताउँदछन्, तिनीहरूसँग, दैनिक आँधीबेहरीबाट हामी सबैलाई तान्छ।
फातिमा: म अनाको प्रत्येक शब्दको सदस्यता लिन्छु। यो केहि अनौंठो कुरा हो: यो अद्भुत पुरस्कार र तपाईको पहिलो उपन्यासको जन्म, जुन पाठकहरूको लागि बाँच्नेछ। यसको अतिरिक्त, क्यानरी टापुहरूमा हुने कामले गर्दा यसलाई प्राप्त गर्न मलाई विशेष गरी सन्तोषजनक साबित भएको छ। मलाई लाग्छ यसले मेरो भूमिको रमाईलो र अज्ञात पक्ष प्रस्ताव गर्दछ। मैले सोचेको जिम्मेवारी पनि याद गर्दछ जुन यस्तो उचाईको पुरस्कारले मैले भविष्यका परियोजनाहरूमा विचार गर्दछु।
तपाइँ दुई वटा वाक्यमा के भन्न सक्नुहुन्छ? के मरेका चुप लागेका छन् y धुंध को कोण?
अना: यो एक क्लासिक उपन्यास हो, परम्परागत स्पर्शको साथ, धेरै लयको साथ, तनाव, हास्य र एक विवादास्पद मानवीय पक्ष जुन तपाइँसँग यो पढेर लामो पछि तपाइँको प्रतिबिम्बमा साथ दिन्छ।
फातिमा: धुन्धको कोण यो १1724२XNUMX को फ्रान्सेली अभियानबाट प्रेरित छ जुन माउन्ट टेइडलाई पहिलो पटक मापन गर्‍यो। यो अन्वेषणको रोमांच र यसको प्रेम सम्बन्धको बीचमा स्लाइड हुन्छ जुन यसको तीन नायकहरू, दुई फ्रान्सेली वैज्ञानिकहरू र एक जवान क्यानेरियन महिला, इमिलिया डे लोस सेलाजेस बीच उठ्छ।
तपाईं कुन नयाँ परियोजनाहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ?
अना: तेस्रो उपन्यास लेख्दै र दोस्रो तयार गर्दै, एक हत्यारा तपाईंको छायाँमा लुक्छ, यसलाई पाठकहरूलाई देखाउन।
फातिमा: मेरो दोस्रो उपन्यास लेख्ने बीचमा, विदेशी प्रवासीहरू, र लेखकहरूको समूहसँग कथाको पुस्तक प्रस्तुत गर्ने बारेमा, छोटो जोडीहरु जोडीहरु लाई जोड्दै छ या छोटो जोडीहरु को लागी बोरिंग कथाहरु।
तपाइँको उपन्यास संग कुनै ढोंग वा तपाइँ मात्र कथा भन्न चाहानुहुन्छ?
अना: मेरो उद्देश्य भनेको रमाईलो समय छ र उनीहरूसँग सँधैको लागि सँधै लिनुहोस्। म आफ्ना पाठकहरुलाई एउटा कथा दिन चाहन्छु जसले उनीहरूलाई यति धेरै ढाक्छ कि यसले मानसिक सफा गर्छ, कि तिनीहरू दिनदिनै पढ्ने समस्याहरू बिर्सन्छन्, कि उनीहरू आफ्नै कहानी जत्तिकै बाँच्दछन् र उनीहरूले यसलाई लिन्छन्। तिनीहरूलाई जब तिनीहरूले अन्तिम एक पृष्ठ समाप्त गर्दछन् र पुस्तक शेल्फमा आराम गर्दछ। उद्देश्य पाठकलाई राम्रो र खराबको साथ पहिचान गर्नका लागि हो, रेखा यस्तो धमिलो हुनु हो जुन मनपर्दछ र मन नपराउँदछ, किनभने हामी मध्ये धेरै जसो परिपक्व वा भयानक छैनौं। तिनीहरू मनसाय, भावनात्मक घाउ र जीवनको विकृतिमाथि प्रश्न गर्न उपन्यासहरू हुन् जसले साधारण व्यक्तिलाई अपराधीमा परिणत गर्न सक्दछन्।
फातिमा: मैले ऐतिहासिक कथानकहरू लेख्ने बारे सोचेको थिइनँ, तर मँ उनीहरूमा आफूलाई धेरै सहज महसुस गरें, महान समयको बाबजुद पनि कागजात जुन परामर्श लिनुपर्दछ। यो उपन्यास निर्माण गर्न मनमोहक छ, एक स्थिर खोज, विघटन गर्न बुन्न, पछाडि जान हिड्ने, र यसबाहेक, त्यो यात्रा सबै इन्द्रियहरूमा भएको छ: समय, भूगोलमा, संवेदनाहरूमा। यस प्रक्रियाका लागि धन्यबाद मैले धेरै चाखलाग्दो व्यक्तिहरूसँग भेटें, म उनीहरूको निरीक्षण गर्न धेरै स्थानहरूमा गएँ, मैले डाटालाई मूल्यवान्‌ ठानें जुन मलाई थाहा थिएन, भन्सार, प्रयोगमा प्रयोग नगर्नुहोस्, संक्षेपमा, यो उत्साहजनक छ। र जब यो प्रकाशित हुन्छ, म आशा गर्दछु पाठकहरूले यो साहस साझा गर्छन् र मसँग यो धेरै बाँचिरहेका छन्। यात्रा जारी राख्नुहोस्, लेखन जारी राख्नुहोस्, र पढिएको सबै उदात्त हुनेछ।
तपाईंले याद गरेको वा पढ्ने पहिलो पुस्तक के थियो? र एक जसले निर्णायक रूपमा तपाइँलाई लेखनमा समर्पण चिन्ह लगाउँछ?
अना: म मोर्टाडेलोसबाट अगाथा क्रिस्टीमा गएको थिएँ। मैले उनको बारेमा पहिलो किताब पढें डोभकोटमा एउटा बिरालो, मलाई राम्ररी याद छ।
मैले उनको लागि अगाथा क्रिष्टिले लेख्न शुरू गरें। सम्पूर्ण संग्रह मेरो घर मा थियो। मसँग ती सबै अझै छन्, म दु: खी स्थितिमा मैले पढेको र उनलाई पुनः पढ्ने समयको मात्राबाट। मलाई लाग्दैन कि मैले एउटा मात्र छनौट गर्न सक्छु। त्यसपछि म जर्ज सिमेननको साथ कमिश्नर मैग्रेट, स्टेनली गार्डनरसँग पेरी मेसनसँग गएँ र त्यसैले आज सम्म मनोवैज्ञानिक षडयन्त्रका लेखकहरूबाट सम्पूर्ण विकास भयो। म प्रख्यात स्पेनिश लेखकहरू मन पराउँछु र उनीहरूले यस विधाको लागि रुचाएका छैनन, म नॉर्डिक्सबाट धेरै भाग्न चाहन्छु, जो व्यक्तित्व विकारका साथ हत्यारामा एकदम केन्द्रित छन्, यद्यपि स्टिग लार्सनले मलाई अँगाल्नबाट रोक्न सकेका छैनन्। उसको चरित्र लिस्बेथ सलान्डरको साथ वा सम्पूर्ण हेनिंग म्यानकल संग्रह खान्छ र उसको जासूस वाल्यान्डरको प्रशंसक बन्छ। विधाबाट मलाई चिह्न लगाउने एउटा? रातको केही पनि विरोध गर्दैन डेल्फीन डि Vigan द्वारा। केवल मेरो शेल्फमा हेरेर, यसले मलाई दिएका अनुभूतिहरूलाई म पुनःभृत गर्दछु। यो द्विध्रुवी आमा, उनको आघात, उसको चोटपना, उनको भावनाहरु संग उनको जीवन को माध्यम मा एक शुरुवात हो।
फातिमा: मलाई मेरो हजुरबा हजुरआमाको घरमा पुस्तकहरू याद छ, तिनीहरू स्कूलका शिक्षकहरू थिए र उनीहरूसँग अलपत्रहरू थिए। त्यहाँ थुप्रै थिए: कल्पित कथा, कथाहरू, चुटकुले थिए। हुनसक्छ अपराधी मँ साहसिक कथाहरू र किंवदन्तीहरु को शौक भयो Ivanhoe। त्यसपछि आर्थरियन मिथकहरू, रहस्यमय टापुहरू, संसारको अन्तसम्म, अन्तरिक्ष वा भविष्यको लागि यात्राहरू आए। म जुल्स भेर्न, इमिलियो साल्गारीसँगै हुर्कें, यहाँसम्म कि केही ग्याल्याडको युद्धले केही गर्मी भर्यो। तर त्यहाँ लेखकहरू छन् जसले तिनीहरूलाई पढ्दा अघि र पछिको प्रतिनिधित्व गर्दछ किनभने उनीहरूले मेरो विश्वासलाई हिलाएका छन्। यसले तपाईलाई केहि फरक पार्दैन जब तपाई लेख्न चाहानुहुन्छ। यसको केही यस्तो कुरा जब म पढ्दछु गेब्रियल गार्सिया मार्क्वेजले उत्पादन गरेका थिए एक भविष्यवाणी भविष्यवाणी को एक क्रॉनिकल। सबै थोक त्यहाँ थियो, त्यो लाईटहाउस थियो। म यसलाई पुन: पढ्छु र म सँधै यसको सबै तत्वहरूमा केहि नयाँ सिक्छु: कथानक, कथा-क्रोनर, चराहरूको गाउँ-ब्रह्माण्ड, भाषा। यी सबै अत्यन्त प्रभावकारी षडयन्त्रका साथ अनुभवी छन् किनभने यसले उपन्यासको अन्त थाहा भए पनि स्थिर रुचि प्राप्त गर्दछ। उत्पादक
तपाईका मुख्य लेखकहरू को हुन्? र तपाइँको काममा सबैभन्दा प्रभावशाली?
अना: धेरै, तर सबैभन्दा मुख्य कुरा म जोस मारिया गुएल्बेन्जुको उनको पुलिस श्रृंखला मा मारियाना डी मार्को अभिनीत प्रत्येक पुस्तकको प्रतिक्षा गर्दै छु, डोना लेनको नेतृत्वमा भेनिसको प्रत्येक नयाँ ब्रुनेटी साहसिक कार्य, वा जीन-लुक बन्नेलेकले ब्रिटनी फ्रान्सेलीमा उनका आयुक्त डुपिन र पेट्रा डेलीकाडोको साथ। , बार्सिलोना, एलिसिया गिमनेज-बार्लेट जसले मलाई धेरै बर्ष अघि अ h्गाल्यो।
फातिमा: त्यहाँ एकल लेखक वा लेखक छैन जो तपाईंलाई ज्ञान प्रदान गर्दछ। यो सत्य हो कि गब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज एक विद्वान छ। तर संसारको अन्त्य भएन, बरु सुरु भयो। त्यहाँ धेरै लेखकहरू छन् जसले मलाई प्रभावित गरेका छन्, उदाहरणका लागि, Cortázar, Kafka वा Lorca।
के तपाईंलाई लेख्ने क्रममा कुनै उन्माद वा बानी छ?
अना: भर्जिनिया वुल्फ भन्ने गर्थे कि उपन्यास लेख्न सक्षम हुन महिलासँग पैसा र आफ्नो कोठा हुनु पर्छ। मलाई समय र मौन चाहिन्छ। केहि घण्टा मौनता र सबै कुरा बाहिर आउन सुरू हुन्छ। मलाई थाहा छैन म के लेख्छु, वा उपन्यासमा के हुन्छ। यो रमाईलो प्रक्रिया हो किनकि म पाठकको भावनासँग लेख्छु जुन अर्को दृश्यमा के हुँदैछ भनेर थाहा छैन।
मलाई एक दिन याद छ जब म बिचमा लेख्दै थिएँ के मरेका चुप लागेका छन् र मैले निरन्तर जारी राख्नको लागि मैले लगाएको कुरा फेरि पढ्ने निर्णय गरें। म पढ्न यति गाह्रो भयो कि मैले पाठकको तनाव महसुस गर्न थालें र आफैलाई सोधें "के त्यो हत्यारा एक्स होइन र?" मैले महसुस गरे कि म लेखक हुँ र त्यो हत्यारा नै मैले गर्ने निर्णय गरें। कहिलेकाँही मलाई लाग्छ कि मैले केहि पनि निर्णय नगर्ने, यो उपन्यास मेरो मनको केही कुनामा लेखिएको छ र म यसलाई कम्प्युटरमा मात्र ट्रान्सक्रिप्ट गर्दछु।
फातिमा: LOL के Ana आश्चर्य छ? यो महान छ। यो सत्य हो कि जब तपाईं "ट्रान्स" मा जानुहुन्छ तपाईं वास्तविकताबाट अर्को समानान्तर संसारमा जानुहुन्छ। कहिलेकाँही यो लाग्दछ कि हातले आफ्नै लेख्दछ र तपाई एउटा प्लोट च्यानलमा हाल्दै हुनुहुन्छ जुन हावाबाट यात्रा गर्दछ। मसँग ध्यान केन्द्रित गर्ने सुविधा छ र म जहाँसुकै र कुनै आवाजमा लेख्न सक्छु। वास्तवमा, व्यक्ति जो दैनिक आधारमा मलाई भेट्न आउँदछन् जहिले पनि मेरो कम्प्यूटरको साथ टाईमा हेर्नुहोस्। "खुलासाहरू" समात्न मसँग सबै ठाउँमा नोटबुकहरू छन्। उपन्यासको अन्त्य भनेको के हो भनेर म स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। बाँकी मलाई थाहा छैन, मलाई कारणहरू थाहा छैन, वा को, वा कसरी, तर जे हुन्छ त्यो सबै अन्तको लागि हो, एक चुम्बकले सम्पूर्ण उपन्यास खान्छ।
र जब तपाइँ समाप्त गर्नुहुन्छ, के तपाइँ तपाइँको वातावरणलाई राय, सल्लाह वा सुधारको लागि सोध्नुहुन्छ?
अना: जब म समाप्त गर्छु, मसँग बेटेरियडर्स क्लब छ, जसले उपन्यास पढेका थिए र मलाई उनीहरूका भावनाहरू पाठकहरूको रूपमा र उनीहरूमा फेला परेका गफहरूबारे बताउँदछन्। केहि घनिष्ट व्यक्तिहरू हुन्, अरूहरू मलाई थाँहा छैनन्, र मेरो लागि तिनीहरू धन हो। म विश्वास गर्दछु कि ती बिना मेरा उपन्यासहरू अधूरा हुनेछन्।
म भाग्यशाली छु दुई दुई पुस्ताका दुई उत्कृष्ट लेखकहरू जोसे मारिया गुएलबेन्जु र लारा मोरेनो, सल्लाहकारका रूपमा र प्रत्येकले आफ्नै विवेकलाई उदा out्गो पार्छन् र मलाई आफ्नै उपन्यासमा त्रुटिहरू देखाउँछन् कि ती बिना म कहिल्यै पनि गर्दिन। सहीमा पुग्नुहोस् र तिनीहरूलाई पठाउन पालिस गर्नुहोस् किनकि ती पाठकहरू उनीहरूलाई प्राप्त गर्न योग्य छन्।
फातिमा: लेखनको प्रक्रियाको बखत धुन्धको कोण मलाई मेरो एक साहित्यिक शिक्षक, महान लेखक जर्ज एडुआर्डो बेनाभिड्सको सल्लाह छ, जो उपन्यास "निदान" गर्नका लागि एक उत्कृष्ट गाइड छ। मैले मेरो वातावरण (आमा, पति, दिदी र साथी) बाट चार कडा पाठकहरूको टोली गठन गरेको छु, तिनीहरू सबैको दृष्टिकोण र तिनीहरूको साहित्यिक स्वादमा फरक छ जुन कम्पासको रूपमा सेवा गर्दछ।
तपाइँ तपाइँका शैलीहरू कसरी परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ?
अना: ताजा, तरल पदार्थ, द्रुत, समकालीन, आधुनिक। मेरा उपन्यासहरूमा पाठक ठिकसँग ठिक समयको लागि रोकिन्छ, टेलिभिजन लिपिमा त्यस्तै चाँडो हुन्छ।
फातिमा: यो प्रश्न परिभाषित गर्न गाह्रो छ। म प्लास्टिक कलाबाट शब्द प्रयोग गर्न सक्छु: अभिव्यक्तिवाद। म शब्दहरूको बारम्बार अन्वेषण गर्न चाहन्छु, उनीहरूको शक्ति, म सिनेस्थेसिया, रूपकहरूसँग खेल्न चाहन्छु, यद्यपि मलाई लाग्छ कि आजकल सरलता, नग्न भाषाको मूल्य छ।
तिमी अहिले कुन किताब पढ्दै छौ?
अना: तपाईले मलाई त्यस्तो क्षणमा समात्नुहुन्छ जुन प्रायः हुँदैन नै: म दुई पुस्तकको साथ छु र न त कुनै अपराध उपन्यास हो। एउटा हो बुबाको मृत्यु कार्ल ओभ Knausgard द्वारा। यो बिस्तारै पढ्ने किताब हो, विचारपूर्वक, लेखकले आफ्ना भावनाहरूको ठूलो ढोका खोलेर हामी भित्रबाट हेर्न दिन्छौं। अर्को प्रकाशक ग्यालक्सीया को उपहार हो, एक स्मार्ट मान्छेXosé Monteagudo द्वारा। उनीहरूले बनाएको मैले भर्खरै सकें नश्वर अवशेष डोना लेन र द्वारा दुष्टको कार्यालय रोबर्ट गालब्रैथ (जेके रोलिंग) द्वारा।
फातिमा: मसँग एउटा नाईट स्ट्यान्ड छ: आवाज रहित टापुको कथा, भेनेसा मोनफोर्ट द्वारा, जससँग म धेरै उन्नत छु र जसको साथ म संलग्न छु, र लाममा, दुधको रंगनेल लेसन द्वारा, र 4, 3, 2, 1पल अस्टर द्वारा।
के तपाईं ती लेखकहरूलाई केही सल्लाह दिन हिम्मत गर्नुहुन्छ जुन भर्खर सुरु भयो?
अना: तिनीहरू जे पढ्न चाहन्छन् लेख्न दिनुहोस्, किनकि त्यस रूपमा उनीहरू आफ्नो काममा विश्वास गर्दछन् र जान्ने छन् कि समाप्त गर्नु अघि उनीहरूसँग पहिले नै पहिलो शर्त प्रशंसक छ। पक्कै पनि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन उनीहरूलाई मनपर्दछ र ती तपाईका पाठकहरू हुन्। यदि होईन भने, तिनीहरू जोखिम चलाउँछन् कि उनीहरूको कामले उनीहरूलाई वा अरूलाई मनपर्दैन र कुनै कथा यसको लायक छैन।
फातिमा: सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न। सुरु गर्नेहरूका लागि, रोक्नुहोस्। यो लामो दूरीको दौड हो, तार तान्नको लागि, आफूलाई पत्ता लगाउने, आफैलाई तोड्ने र आफैलाई सँगै राख्ने, तर यसलाई रोक्न सकिदैन। हामीले खाली पृष्ठको डरको मिथ्या तोड्नै पर्छ। तपाईले बस्नु पर्छ र शब्दहरू चलाउनु पर्छ। अचानक, सबै कुरा देखा पर्नेछ। र जब कथाको जन्म हुन्छ, यसलाई फेरि पढ्नुहोस्, यसलाई सच्याउनुहोस्, यसलाई बचाउनुहोस्, यसलाई प्रमोट गर्नुहोस् र जहाँसम्म सम्भव भएसम्म जानुहोस्, किनकि हामीसँग पहिल्यै केहि नगरीकन "हो"।
ठीक छ, हामी तपाईंको उत्तर र दया को लागी धन्यवाद दिन्छौं। र हामी तपाईको साहित्यिक क्यारियरमा अरु धेरै सफलताको कामना गर्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » हामी आना रिवेरा मुइज र फतिमा मार्टेन रोड्रिगिज, टोरेन्टे ब्यालेस्टर अवार्ड २०१ with को साथ कुरा गर्छौं।